Apixaban uye Rivaroxaban powder
ne admin pane 21-06-10
Mumakore achangopfuura, kutengesa kweapixaban kwakura nekukurumidza, uye musika wepasi rose watopfuura rivaroxaban powder. Nekuti Eliquis (apixaban) ine mukana kupfuura warfarin mukudzivirira sitiroko uye kubuda ropa, uye Xarelto (Rivaroxaban powder) yakangoratidza kusazvidza. Uye zvakare, Apixaban haina ...
Guangzhou API kuratidzwa muna 2021
ne admin pane 21-05-13
The 86th China International Pharmaceutical Raw Materials / Intermediates / Packaging / Equipment Fair (API China kwenguva pfupi) Murongi: Reed Sinopharm Exhibition Co, Ltd. Nguva yekuratidzira: May 26-28, 2021 Exhibition chikero: 60,000 mativi metres Ex ...
Musi waChikumi 29, Intercept Pharmaceuticals yakazivisa kuti yagamuchira mushonga mutsva wakakwana kubva kuUS FDA maererano neFXR agonist obeticholic acid (OCA) yefibrosis inokonzerwa neisina-doro steatohepatitis (NASH) Mhinduro tsamba (CRL). Iyo FDA yakataura muCCRL zvinoenderana nedata ...
ne admin pane 21-04-26
Musi waGumiguru 22, nguva yekuMabvazuva, iyo US FDA yakabvumidza zviri pamutemo Giliyadhi antiviral Veklury (remdesivir) kuti ishandiswe muvakuru vane makore gumi nemaviri zvichikwira uye ichirema anosvika makumi mana makirogiramu vachida kurapwa uye COVID-19 kurapwa. Sekureva kwe FDA, Veklury parizvino ndiyo yega FDA-inogamuchirwa COVID-19 t ...
Kubvumidzwa ziviso yeRosuvastatin Calcium
ne admin pane 21-04-20
Munguva pfupi yapfuura, Nantong Chanyoo akaita chimwe chiitiko munhoroondo! Nekuedza kweanopfuura gore rimwe, KDMF yekutanga yeChanyoo yakatenderwa neMFDS. Seye mukuru kugadzira Rosuvastatin Calcium muChina, tinoshuvira kuvhura chitsauko chitsva mumusika weKorea Uye zvimwe zvigadzirwa zvaizo b ...
Kunyoresa Chitupa (Rosuvastatin)
Musiyano uripo pakati peTicagrelor naClopidogrel
Clopidogrel uye Ticagrelor ndivo vanopesana neP2Y12 vanodzivisa ndiro yepamusoro adenosine diphosphate (ADP) nekusarudza kusanganisa kusungwa kweadenosine diphosphate (ADP) kubhodhi yayo P2Y12 receptor uye chiitiko chechipiri ADP-inopindirana glycoprotein GPII.b / III.a tata. Bot ...
Musiyano uripo pakati peatorvastatin calcium mahwendefa uye rosuvastatin calcium mahwendefa
ne admin pane 21-03-16
Atorvastatin calcium mahwendefa uye rosuvastatin calcium mahwendefa ari maviri statin lipid-achideredza madhiragi, uye ese ari maviri ane masimba masimba statin zvinodhaka. Misiyano yakatarwa ndeiyi inotevera: 1. Kubva pamaonero e pharmacodynamics, kana iyo dosi iri yakafanana, iyo lipid-inoderedza mhedzisiro ye rosu ...
Chii Chaunofanira Kuziva Nezve Rosuvastatin
Rosuvastatin (zita rekuti Crestor, rinotengeswa neAstraZeneca) ndeimwe yemishonga inowanzoshandiswa. Kufanana nemamwe ma statins, rosuvastatin inorayirwa kuti ivandudze huwandu hweropa remunhu uye nekudzora njodzi yemoyo. Mumakore gumi ekutanga kana zvekuti rosuvastatin yaive pamusika, ini ...
Kukorokotedza 70th Anniversary yeChangzhou Pharmaceutical Factory !!!
ne admin pane 20-10-14
Kusvikira Gumiguru 16, 2019, Changzhou Pharmaceutical Fekitori ine nhoroondo yemakore makumi manomwe, uye yakafukidza 110000m2 uye yakashandisa matanda mazana mapfumbamwe, kusanganisira mazana matatu mahunyanzvi ane hunyanzvi hwakasiyana. Nyanzvi mukugadzira zvemwoyo mishonga ...
Mashandisiro anoita Fette Kubata China inotsigira Hondo yekurwisa COVID-19
Denda repasi rose re COVID-19 rakachinja tarisiro yekudzivirira denda uye kudzora hutachiona munzvimbo dzese dzepasi. IWHO iri kurega kuita nhamburiko yekudaidza nyika dzese kuti dzisimbise kubatana uye kubatana kurwisa chirwere chehosha chakapararira. Nyika yesainzi yanga ichitsvaga ...
CPhI & P-MEC China 2019 vakapemberera uye vakawana kubudirira kukuru kuChangzhou Pharmaceutical Fekitori!
R&D MANAGEMENT Yakakwana R&D chikuva Yakavakirwa Mishonga Yekutsvagisa Institute, kuve neposvo-yechiremba resreach nharembozha, kubatanidza zviwanikwa zvizere, kuchimhanyisa budiriro yekuvandudza ...